Mmemme ndị ntorobịa - Ụlọ akwụkwọ asụsụ na Canada
Mmemme ndị ntorobịa
MGBE NDỊ MGBE NDỊ MGBE ỤBỤRỤ
BLI na-enye ọtụtụ ihe omume maka ndị na-eto eto na-eto eto
Akpọrọ ọkụ · Ezumike
Ụmụ akwụkwọ ndị na-ekere òkè na ụdị mmemme a na-eto eto na nkà na ụzụ ha
Onye na-ahazi ụlọ akwụkwọ na BLI
Mmemme Ọzụzụ Asụsụ Mba Ọzọ
FLAP · Ezigbo Edition 17-
BLI na-enye usoro mmemme okpomọkụ dị egwu ebe ndị niile so na ya ga-enwe oge dị egwu na gburugburu ebe nchekwa ma dị nchebe.
Ọ bụ ezie na ndị ọ bụla mara ụlọikwuu na-amụ Bekee ma ọ bụ French, ha ga-enwe obi ụtọ, nwee ndị enyi si n'akụkụ ụwa dum ma nwee obodo dịka Montreal, Quebec, Toronto, Niagara Falls, Ottawa na ebe ndị ọzọ mara mma na Canada.
Nchebe na ike nke ndị na-ama ụlọikwuu bụ ihe kachasị mkpa anyị. N'ebe ọ bụla ụmụ gị nọ, ha ga-anọ n'okpuru nlekọta anya mgbe nile, ha ga-enwetakwa nkwado dị mkpa iji bie ndụ kachasị mma ọmụmụ nke ndụ ha.
Ihe niile na-atọ ọchị
Egwuregwu Winter Edition 17-
BLI Ngwongwo ihe omimi nke ihe omumu na-enye ezigbo ihe omumu di iche iche na-achikota Bekee na French na-amuta ihe di iche iche na-akpali akpali n'oge oyi na gburugburu ebe obibi.
Ihe mgbaru ọsọ anyị agaghị agafe ịkụziri Bekee na French. Anyị na-achọ inye ụmụ akwụkwọ anyị ohere iji gbasaa mbara igwe ha site n'ịme ndị enyi ọhụrụ si n'akụkụ ụwa nile.
Ezumike Ezumike Ezumike 17 +
Mmemme mmemme ezumike BLI na-enye gị ohere na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali ịmụta asụsụ Bekee ma ọ bụ French. klaasị iji mee ka obi sie ike mgbe ị na-eji Bekee eme ihe kwa ụbọchị. Mgbe ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ, ha ga-ekere òkè na mmemme haziri ahazi nke e mere iji nweta ọtụtụ n'ime oge gị na Canada.
Mụọ English ma ọ bụ French na BLI ma nwee oge nke ndụ gị.
Ememme Ezumike Winter + 17 +
Chọpụta oge oyi oyi nke Canada!
Nwee ahụmahụ oyi na-enweghị nchefu na Canada mgbe ị na-amụ asụsụ Bekee ma ọ bụ French na-atọ ọchị.
A na-eji klas eme ihe iji wulite obi ike mgbe ị na-eji Bekee eme ihe kwa ụbọchị. Mgbe ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ, ha ga-ekere òkè na mmemme haziri ahazi nke e mere iji nweta ọtụtụ n'ime oge gị na Canada.
Na-amụ Bekee ma ọ bụ French na BLI ma nwee oge nke ndụ gị!